Waxyi & Taakuleyn loogu diyaargaroobayo Musiibo - Gargaarka Gargaarka ee Musiibada
Bogga ugu weyn/updates/Waxyi & Taakuleyn loogu diyaar garoobayo Musiibo
Sidaan u galno xilli duufaan ah xilliyada Atlanta iyo xilliyada dabka ee Galbeedka, Mutual Aid Musiibo Relief waxay soo uruurineysaa talooyin loogu talagalay u diyaarinta jaaliyadaha inay is ilaashadaan midba midka kale iyadoo loo adeegsanaayo is caawinta labada dhinac markii ay musiibo dhacdo. Hoos waxaa ku taxan liiska aan bilownay oo aan sii wadnay inaan ku darno sidii y'all u gudbinno fikrado cusub oo ku saabsan dariiqooyinka loogu diyaariyo musiibada.
Hadaad kudarto si aad u sameyso liiskan ama aad jeclaan lahayd soo gudbi warbixin Mashaariicda diyaarinta ee ay bulshadaadu horay usameysay, noogu soo dir emaylka [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii adiga ama bulshadaadu u baahan tihiin ilo in la qabto dhacdo diyaarin musiibo ama loo qaybiyo sahay, Gargaar Musiibo oo Gargaar ah ayaa gacan ka geysan karta inay dhacdo. Noogu soo dir emailka at [emailka waa la ilaaliyay] faahfaahinta ku saabsan agab kasta ama agab aad ubaahan tahay oo laga yaabo inaanu kaa caawin karno.
U diyaar garowga shabakad ahaan waa laba waji - Waxaan isku diyaarin karnaa shaqsiyadeena sidoo kale waxaan taageeri karnaa u diyaar garowga bulshooyinka la haybsooco, kuwa aan kaliya saamaynta xun ku yeelan laakiin sidoo kale kuwa ay u badan tahay inay ka tagayaan dawladda iyo hay'adaha gargaarku. Diyaarso naftaada oo ka fikir hal-abuur ku saabsan siyaabaha aad ku taageeri karto bulshooyinkaaga waaweyn si aad u sameyso isla, haddii ay tahay la wadaagista macluumaadka deriska halista ku jira ama qabashada munaasabadaha si loo sameeyo qorshooyin musiibo oo wadareed.
U diyaar garowga Masiibooyinka guud
Helitaanka dukumiintiyada si hagaagsan:
Ka qaad sawirro dukumiintiyadaada ugu muhiimsan (kaarka amniga bulshada, aqoonsiyada, shahaadada dhalashada, caddeynta amaahda, canshuur celinta, howlaha, iwm.) Iskuna day inaad xafiddo dukumiintiyada meel aamin ah inta lagu jiro musiibada ama ha ku xafido. goortaad guuraysid. Helitaanka gargaarka degdegga ah waxay kuxiran tahay awoodda aad u leedahay inaad keento dukumiintiyadaan sidoo kale waxay jiidi kartaa hannaanka soo kabashada haddii ay tahay inaad wax ka beddesho.
Hubso in dhamaan xayawaanka la haysto ay leeyihiin astaamo aqoonsi.
Magaalooyin iyo degmooyin badan ayaa leh adeegyo ogeysiin deg-deg ah laakiin waa inaad doorataa inaad hesho macluumaadka.
Gaadiidka iyo milkiileyaasha guryaha:
Qaado sawirro wakhtiyeysan oo ku socda baabuurkaaga iyo gurigaaga musiibo ka hor haddii wax khasaare ahi dhaco, waxaad caddeyn u tahay inay musiibada ka timid ujeeddooyin caymis awgood.
Haddii gurigaaga uusan ku jirin magacaaga waxay daahi kartaa helitaanka gargaarka. Waad ka hubin kartaa xafiis-hayaha degmada si aad u fiiriso inuu gurigaaga ku yaal magacaaga. Hadday taa ahayn, ogeysii xubnaha qoyska ee sida rasmiga ah gurigaaga u leh inay musiibo saameyn karto. Haddii ay suurogal tahay, bilow habka aad magacaaga ugu darineyso falka, ama wareejinta lahaanshaha adiga. Haddii milkiilaha rasmiga ahi nool yahay tani run ahaantii ma adkaan doonto, laakiin haddii ay dhintaan waxaa jiri kara khilaaf u dhexeeya milkiileyaasha suurtagelinaya dib u dhaca howlaha. Si kastaba ha noqotee, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan u bilowdaa hawsha.
Ka hubso shirkadaha caymiska inaad soo aragtid haddii siyaasadaha waqtigan la joogo oo la bixiyo. Waxaa laga yaabaa inaadan awoodin inaad iska bixiso, laakiin haddii aad ku jirtid qorshe lacag bixin taas oo ka dhigaysa inay siyaasadu noqoto mid shaqeynaya. Xeerarka caymiska fatahaada ma shaqeynayaan illaa 30 maalmood ka dib marka la iibsado.
Hubi diiwaannada canshuurta hantida. Si la mid ah caymiska, milkiileyaasha guryaha looma diidi karo FEMA inay ka dambeyso diiwaannada canshuurta hantida. Si kastaba ha noqotee, Ururada aan dawliga ahayn ayaa laga yaabaa inay ka labalaabaan inay bixiyaan caawimaad haddii ay ka walwalaan in maalgashi ay magaaladu dib u soo ceshan doonto. Mulkiileyaasha guryuhu waxay ku jiri karaan qorshe lacag bixin oo wixii deyn ah looga saari karo guryahooda.
Isu diyaarinta daadgureynta ama hoyga meesha
Haddii aad guurtid ama aad hoygaaga kujirtid, waa inaad heysataa daawooyin adiga ama qoyskaaga aad u baahan tihiin, biyo la cabbo iyo xoogaa cunno oo la cuno, (haddii aad ku hoydaan meesha, laba toddobaad oo cunto iyo biyo leh ayaa lagu talinayaa), toosh iyo baytariyada , iyo nooc aqoonsi ah. Waxa kale oo aad ku dari kartaa taleefannada gacanta ee qoraxda ama gaariga. Raadiyaha la qaadan karo ee ku shaqeeya baytariga ama ku shaqeeya cabitaan ayaa sidoo kale ka caawiya helitaanka macluumaadka. Hayso xoogaa lacag caddaan ah maadaama ATM-yada laga yaabo inaysan shaqeyn karin iyo kaararka deynta / amaahda lama aqbali karo marka ay dansan tahay.
Diyaarso bac boorso ah (xirmada saadka musiibada) oo sahayda kor ku xusan oo aad la qabsan karto meesha aad ka baxeyso haddii ay tahay inaad si deg deg ah uga baxdo.
Kaydi dhalooyinka 2-litir oo ka buuxso biyo. Qaboojiye, haddii aad boos ku leedahay qaboojiyahaaga. Tani waxay ku siin doontaa biyo celin. Sidoo kale, qaboojiyaha buuxa wuxuu sii dheeraanayaa qabow.
Haddii aad diyaar u tahay inaad gargaar siiso dadka kale inta lagu jiro musiibada oo aad baabuur leedahay, hayso xoogaa biyo ah, agabyada gargaarka degdegga ah, kuwa wax lagu keydiyo ee N95, agab kasta oo samatabbixin iyo aalad diyaar u ah inay gasho jirriddaada.
Bambooyinka shidaalka gaaska ma shaqeyn doonaan bilaa koronto la'aan; iskuday inaad haantaada ka buuxdo.
Waxaa jira sababo badan oo dadku aysan dooran karin ama dooran karin inay u guuraan inta lagu jiro musiibada, laakiin haddii aad qorsheyneyso inaad u daadgureyso, ka fikir sida reerkaagu u daadgureynayo. Aqriso qorshahaaga magaalada / gobolka. Ka fikir halkaad aadi laheyd, cidda aad la joogi karto, iyo sidaad halkaas u tageysid. Magaalooyinku waxay u badan tahay inay dhistaan ​​gabbaad, laakiin dadka taga guryaha kuwa la jecel yahay waxay soo sheegaan walaac aad u yar, natiijooyin caafimaad oo aad u wanaagsan, oo inta badan si cadaalad ah u wanaagsanaada muddada dheer.
Tag albaab-ilaa-albaab ama ku qabso dhacdo xaafadaada si aad u ogaato cidda u baahan taageerada dheeraadka ah ee daadgureynta. Naafada iyo dadka waayeelka ah waxay halis ugu jiraan in laga tago, lagana yaabo inaysan haysan dariiq ay ku ogaadaan musiibo ka hor intaysan albaabkooda imaan.
Isla markii musiibo dhacday:
Qaado sawirro waqtiyeysan oo dukumiinti ah wax walba oo waxyeelloobey. Hubi derbi kasta oo laga tuuro aasaaska dhajinta. Hubi tuubooyinka kasta oo ay dillaaci karaan dabaysha awgeed.
Ha iloobin inaad ku isticmaasho waxyaabaha la dubay, koronto-dhaliyeyaasha, iyo waxyaabaha la midka ah banaanka, meelaha hawo wanaagsan leh. Kaarboon monoksaydh ayaa dili kara.
Haddii korontadu go'do, cuntada ku jira qaboojiyaha iyo qaboojiyaha muddo dheer ma sii socon doonaan. Ka fikir tixgalinta iyo la wadaagida deriska.
Samee nidaam lagula socdo rasiidhada inta lagu jiro dayactirka. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu xun ee ku dhici kara qoysaska hela caawimaadda ayaa ah in markii dambe la waydiiyo inay caddeeyaan sida ay ku bixiyeen lacagta oo aysan u sameyn karin. Waa nidaam arxan daran laakiin mid aan ku qasban nahay inaan u diyaar garowno. Abuuritaanka galka faylka ama buuga xusuus qorka aad ku ridan karto rasiidhada waa dhaqan fiican. Haddii kale, waad iska qaadi kartaa sawirrada rasiidhada oo waxaad ku keydin kartaa si dijitaal ah. Mar kasta oo aad la shaqeysid qandaraasle waa inaad weydiisataa sicir, qaansheegad, iyo rasiid, xitaa haddii ay saaxiib qoys yihiin.
DIYAARINTA HURRICANE & DIYKA
Daad kahor / duufaanta:
Ka ilaali duufaanta qashinka ee deegaankaaga.
Jarjar geedaha si aad u yarayso fursadaha laamood u soo duulaan gurigaaga.
Haddii duufaan soo socoto, u rog qaboojiyaha iyo qaboojiyaha goobaha ugu qabow. Hana furin albaabada inaad ubaahantahay mooyee. Tani waxay ka dhigi doontaa inay wax waliba sii yara dheeraadaan, ilaa 4 saacadood qaboojiye aan awood lahayn iyo ilaa 48 saacadood oo barafeeyaha ah.
Buuxi saxamada qubeyska iyo weelka lagu qubo ama tixgeli biyo qabatinka biyaha roobka. Biyahaan waxaa loo isticmaali karaa nadaafad ama nadiifin.
Soo ururi cuntooyinka aan u baahnayn diyaarin badan ama karinta oo ay yihiin kuwo deggan. Nadiifintu way adagtahay biyo la'aan.
Dhig daaqadaha ama daaqadaha daaqadaha. Ha duubin em. Waxba kama qabanayso inay ka ilaaliso taas bedelkeedana waxay ku reebaysaa qori iyaga saaran oo ay tahay inaad hadhow nadiifiso.
Samee qorshe aad ku gaadho meel sare. Hayso khariidad jireed oo ku habboon marinka daadgureynta maadaama taleefannadu shaqeyn karaan.
Haddii daad aad u sarreeya ay suurtagal tahay, ha aadin saqafka sare maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inaad ku xannibnaato. Haddii aad gasho saqafka, hayso qaanso yar oo anfac leh ama ku kaydso sagxadda guriga si haddii aad ku dhegto, waxaad u jabsan kartaa habka aad uga baxdo saqafka.
Soo qaado alaabada saqafka leh. dheriyo, ama shey kale oo banaanka ah si looga ilaaliyo in lagu afuufo ama / ama ay noqdaan mashaakil.
Intii lagu jiray daad / duufaan:
Hoyga meel. Ha uga bixin dhexdeeda haddii ay suurtagal tahayba.
Ka dheerow daaqadaha iyo albaabada. Qolalka gudaha, armaajooyinka, iyo hoolka hoyga ayaa nabad ah.
Dhismooyinka ad adag ayaa wanaagsan, guryaha guurguura looma dhisin inay u adkaysato dabaylaha culus.
Sare u qaad waxyaalahaaga ugu muhiimsan. Sida caadiga ah ma cadda sida biyo sare u imanayaan, laakiin xitaa in la dhigo waxyaabo aad u qiimo badan miisaska dushiisa, ama kor armaajoyinka kaydsan ayaa badbaadin kara lacag badan muddada dheer. Suxuunta weelka maydhayaan ma ilaalin doonaan waxyaabahaaga maxaa yeelay looma samayn inay ka hortagaan inay biyuhu galaan gudaha cadaadiska biyaha dibedda.
Ka digtoonaan dheeraad ah waxaad ku jabin kartaa korantada iyo gaaska gurigaaga kahor intaadan bixin. Biyo ku haysashada meelaha korantada ku shaqeeya waa inay ku tuuraan meelaha wax kululeeyaan laakiin haddii aad ka dahday ama shaqada aan korantada kaa goyn laga yaabee ma laga yaabaa. Ka saar qalabka yar yar.
Iska ilaali taabashada daadadka haddii ay suurtagal tahay. Waxaa lagu sumayn karaa wasakhda, kiimikooyinka sunta ah, iyo waxyaabo kale oo waxyeelo u geysan kara.
Daad / duufaan kadib:
Ogeysii asxaabta iyo kuwa aad jeceshahay inaad nabad qabtid isla marka aad awooddo.
Ha taaban ama ha u dhowaan meelaha korantada laga soo tuuro
Daadadka kadib, ka saar waxyaabaha qoyan sida ugu dhakhsaha badan ee aad u diiwaangeliso burburka. Tani waxay yareysaa waxyeelada caaryada waxayna xawaareysaa soo kabashada muddada dheer.
Qaado dadka N95 (caaryada naqshadeynta naqshadeynta) sida ugu dhaqsaha badan uguna macquulsan. Caaryada madow waxay bilaabi karaan inay ku faafto maalmo gudahooda marka biyuhu dib u soo noqdaan oo ay yeeshaan saameyn caafimaad muddo dheer.
DIYAAR & Qiiq SOO DIYAARINTA
Sida PG & E ay leedahay qorshooyinka ku dhawaaqay in la gooyo korantada inta lagu jiro xaaladaha khatarta dabka dabeed, sameynta qorshooyinka awooda deg degga ee muhiimka ah waa muhiim, gaar ahaan deganeyaasha nugul ee ku tiirsan korantada ama awooda bateriga si ay qaboojiyaha daawada ama qalabka caafimaadku u shaqeeyaan. Kuwa ku tiirsan ceelasha ayaan awoodin inay biyo ka helaan. A / C wuxuu joojinayaa shaqadiisa sidaa darteed qiiqa wuu ka sii dari doonaa guryaha dadka.
SAAMAYN KU SAABSAN DIYAARINTA XIRIIRADA Bulshada
Samee oo gudub warqadaha xayeysiinta ah oo ay ku jiraan wixii macluumaad ah ee kor ku yaal si aad ugu taageerto deriska diyaarinta. Hubi si aad u aragto haddii magaaladaada ama degmadaadu ay hayso macluumaad ku saabsan qorshahooda hawlgallada deg degga ah ee loo qaybin karo. Dawladaha hoose ayaa had iyo goor leh waraaqo yar yar oo ku saabsan agabyada la heli karo ee loogu talagalay bulshooyinka bilaa guryaha ah kuwaas oo caawin kara haddii ay musiibo dhacdo. Weydii xarumaha bulshada ama xarumaha diinta haddii aad uga tagi karto waxyaabo si aad u siiso bulshooyinkooda.
Ku qabso kulan xaafadaada ama bulshadaada si aad u horumarisid qorshe wadareed. Sharax halka ay ku taallo sare, haddii ay jiraan kaniisado horay uga heshiin doona hoyga dadka ama sahayda, iyo yaa leh doonyo ama aalado kale oo waxtar u leh xaafadda. Haddii ay suurtagal tahay, ka hadal cidda haysata meel dheeri ah oo lagu kaydiyo alaabtooda iyo agabyada kale ee dadka kale haddii laga daadguro.
Abaabul bulshadaada si aad ugu cadaadiso dowladda hoose inay qabato shaqo diyaarin sida nadiifinta godadka bullaacadaha. Ku cadaadi dawladaha hoose inay hubiyaan hoyga ay dhisteen inay yihiin kuwo loo wada dhan yahay oo amaan u ah dadka la hayb sooco sida ugu macquulsan. Dawladaha hoose qaarkood waxay leeyihiin qorshayaal ay ku aqbalaan oo keliya dadka caddeyn kara deggenaanshaha hoyga maxalliga ah, marka laga reebo dadka bilaa guryaha ah iyo kuwa aan haysan ama aan la imaan karin aqoonsigooda. Haddii hoygu aanu ahayn meel ammaan u ah dadka ay la soo daristay hoy la'aan, dadka leh waaranno, ama dad aan sharciyeysnayn, waxay ka shaqeeyaan sidii ay ku heli lahaayeen beddelaadyo kale.
Ku dhawaad ​​milkiileyaasha dhaxalka 20,000 milkiileyaasha guryaha ayaa loo diidey FEMA ama HUD ka dib markii ay dhacday Hurricanes Katrina iyo Rita maxaa yeelay awoodi waayey inay u muujiyaan cinwaan cad cad hantidooda waqtigooda (source). Qabso dhacdo si aad uga caawiso isku xidhka mulkiilayaasha guryaha iyo qareenada kaa caawin kara samaynta falalka guryaha magacyadooda haddii ay dhaxleen guriga. Hawsha wareejinta hawsha waxay qaadataa wax ka badan maalin laakiin la xiriirinta qareen si ay howsha u sii waddo waxay badbaadin doontaa waqti badan iyo dadaal marka ay musiibo dhacdo. Haddii qof u dhow dhammaadka noloshiisa oo ku nool aag ay suuragal tahay inuu masiibo saameyn ku yeesho, qareen ayaa kaa caawin kara qoritaanka fal maxkamaddeed, kaas oo qaadanaya wax ka yar saacad, kaas oo si otomaatig ah ugu wareejin doona kiiska magaca dhaxalka marka ay gudub.
Noqo mid bulshada ka faaiidaysta; kaydi sahayda dheeraadka ah si ay ula wadaagaan kuwa kale ee iyaga ugu baahan haddii ay dhacdo musiibo. Xiriir la samee deriskaaga. Aasaaska, sida cuntada iyo biyaha, waa mid weyn, laakiin sidoo kale tixgeliya hadiyado gaar ah ama fikir badan oo dhaafa habka-noolaanshaha oo ka caawiya dadka inay dareemaan in la daryeelo.
Sida had iyo jeerba, sii wad qabanqaabinta abaabulka bulshada iyo shaqada gargaarka ee ka dhaxaysa deriskaaga iyo bulshooyinka waaweyn. Xidhiidhada, kheyraadka, aqoonta, iyo xirfadaha laga helo cilaaqaadka lagu dhisay halganka waxay muhiim u yihiin jawaabcelin wax ku ool ah oo wadaagga ah ee ku saabsan masiibo kasta.
Badanaa, aafooyinka, ha ahaato mid shaqsi ama mid wadareed, waxaan dhexdeena ka heleynaa awood aan la cabbiri karin ama la qeexi karin. Waxaa jira bedel u ah hoarding, rabshadda zombie-prepper trope. Beddelkaani waa mas'uuliyad bulsho oo dareen leh oo shaqsiyaadka iyo kooxaha badankood ay ku dheelitiri doonaan marka ay dhibaatadu dhacdo. Ka caawi umulisada tan. La wadaag waxaad haysato. Xaddid xirfadahaaga, Kheyraadka, isku xirka, iyo shabakadaha si aad mid walba midba midka kale uga haqabtirto baahida. Oo nagala soo xiriir gurmad marka aad u baahatid. Kali ma tihid.
Xor ayaad u tahay inaad isticmaasho mid kasta oo macluumaadkan ah oo aad si ballaadhan u qaybiso. Haddii aad samayso waraaqo diyaaradeed ama qalab kale, noo soo dir email-ka si aannu iyaga ugu dhajin karno! ([emailka waa la ilaaliyay])